विश्वकै अचम्मको परम्परा, जहाँ पहिला यौनसम्पर्क गरेर मात्र विवाहका लागि केटी छानिन्छ | Butwal Dainik
२०७८ आश्विन २०, बुधबार (२ हफ्ता अघि)
७७६ पटक पढिएको
एजेन्सी ।कतिपय कुराहरू सुन्दै अनौठो लाग्छ । आ–आफ्नो ठाउको परम्परा अनुसार समाजको नियममा बाँधिनु पर्ने हन्छ । यस्तै छ कम्बोडियाको सुन्दा आश्चर्य लाग्ने खालको परम्परा जहाँ छोरीलाई आफ्नो जिवन साथी रोज्न एक भन्दा बढी पुरुषसंगका यौन सम्बन्ध राख्न अभिभावकले नै उक्साउँछन् ।
छोरीहरुको सजिलोका लागि बुवाआमाले नै घरभन्दा केही टाढा प्रेम झुपडी बनाइदिन्छन् । यसमध्येको एउटा परम्परा कम्बोडियामा छ, जहाँ युवतीहरुलाई धेरैजना पुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो लागि उपयुक्त लोग्ने छान्ने स्वतन्त्रता छ ।
कम्बोडियाको क्रिउन आदिवासीहरुमा विवाहको एउटा अनौठो परम्परा रहेको छ । आदिवासी समुदायका चेलीहरु विवाह पूर्वनै आफुले चाहेका एकभन्दा धेरै युवकहरुसँग यौन सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।
उक्त लभ हट अर्थात् प्रेम झुपडीमा अविवाहित छोरीहरु आफूले चाहेको युवकसँग रात बिताउन तथा सहवास गर्न समेत पाउँछन् । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
किशोरावस्थाबाटै छोरीहरुले त्यस्तो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दछन् र बाउले बनाइदिएको प्रेम झुपडीमा धेरै भन्दा धेरै युवकहरुसँग प्रेम तथा सहवास गरी आफ्नो लागि उपयुक्त जिवनसाथी छनोट गर्दछन् ।
भनिन्छ श्रीमान र श्रीमती भनेको एक रथका दुइ पांग्रा हुन् । जीवनमा यी दुईको वीचमा मेल हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ । सुमधुर सम्बन्धले मात्र जीवन सहज हुने गर्दछ । श्रीमान-श्रीमती बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाई राख्न तपाई कहिल्यै पनि कुनै पनि हिसाबले आवेशमा आएर गलत ब्यवहार नगर्नुहोस् । भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक कुनै पनि दृष्टिकोणले आफुलाई सँधै शान्त राख्नुहोस् । एकजना प्रसिद्ध धार्मिक ब्यक्तिले भनेका छन् , मानिसहरु कसरी आफ्ना श्रीमतीलाई कु’ट’पि’ट गर्न सक्छन् र त्यही श्रीमतीसँग राती सु’त्न सक्छन् ?
जीवनभर एकअर्कालाई साथ दिने बाचा कसम खाएर जोडिएको कतिपयको सम्बन्ध बिच बाटोमै आएर तोडिन्छ । एउटै छानोमुनी बस्ने, एउटै ओछ्यानमा सुत्ने, एउटै थालमा खाने भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएका जोडिहरु एकाएक किन टुट्छन् ? आत्मियताको साथ प्रगाढ बनेको सम्बन्धमा कटुता आउनु भ्रम र अविश्वास बढ्नु अन्ततः अलग विषय हुन् ।
तर सम्बन्धलाई पुनविराम दिने अवस्थामा पुग्न एउटै कारण हुँदैन् । यो बेला दुवैले आफुहरुको सम्बन्धमा केही न केही गल्ती गरेकै हुन्छन् । एक दाम्पत्य जोडी टुट्नु एक दुखद कुरा कुरा हो । यसले श्रीमान श्रीमतीलाई मात्र हैन उनीको सन्तानलाई समेत नराम्रो असर पर्छ । उनीहरुका आफन्त , नातेदार इष्टमित्र छरछिमेकी यस्तो कुराबाट प्रभावित हुन्छन् ।
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धि थप